Iindaba -I-Cordyceps Powderedit
Thatha ithisipuni nganye ixesha ngalinye, malunga ne-1 ukuya kwi-1.5 yeegramu, kwaye uyithabathe ngamanzi ashushu, isiqingatha seyure emva kwesidlo sakusasa kunye nesidlo sangokuhlwa, kunye nesiqingatha senyanga.
Idosi yemihla ngemihla
Elona dosi ligqwesileyo lemihla ngemihla zii-2 ukuya kwezi-3 iigrem, kube kanye kusasa kwaye kube ngokuhlwa.
Ngokwemigaqo yamayeza emveli amaTshayina, ukuthatha ixesha ngokubanzi yimizuzu engama-30-60 ngaphambi nasemva kwesidlo, kwaye isiphumo sesona silungileyo. Kuba i-enzyme efihliweyo esiswini yeyona isebenzayo ngeli xesha, idityaniswa ne-peristalsis yesisu, ukutya okuthathwe ngaphambi nasemva kwesidlo kungacolwa kancinci kunye nokutya esiswini kwaye kuhlale esiswini ixesha elide ixesha, elilungele ukufunxwa kwezondlo. Ke ngoko, ixesha lokuthatha libalulekile kwisiphumo salo. Xa uthatha izongezo zempilo, ixesha lokuthatha kufuneka libanjwe ngokufanelekileyo.
Ukugcinwa kweCordyceps powder
I-Cordyceps powder ilula ngokulula ukufunxa ukufuma, kwaye iya kuvelisa ukungunda kunye nokubola emva kwexesha elide. Okwesibini, ukukhanya okuninzi kunokubangela i-oxidation. Ngenxa yoko, izithako ezisebenzayo zeCordyceps sinensis ziyancitshiswa. Ke ngoko, i-cordyceps powder kufuneka igcinwe kubushushu obuphantsi, kwindawo emnyama, neyomileyo. Iimveliso zalo naluphi na uhlobo ziphantsi kwemida yokugcina ixesha, kwaye iCordyceps sinensis ayikho. Ukuba izinto zokupakisha kunye neemeko zokugcina zilungile, ixesha lokugcina elinxulumene liya kuba lide. Kodwa ngenxa yokuba iCordyceps kulula ukufunxa ukufuma, kulula ukuyibumba emva kokufunxa ukufuma, kwaye kwangaxeshanye, kulula ukuba ifakwe i-oxidized, ke ixesha lokugcina alifanelanga ukuba lide kakhulu, kungenjalo liya kuchaphazela ukusebenza kweCordyceps.